ငွေသုံးသိန်း ရှိတယ်… ဘာရင်းနှီးရင် ကောင်းမလဲ (အရမ်းကောင်းတဲ့ Idea လေးပါ) – Let Pan Daily
သိပ်ကောင်းတဲ့ idea တစ်ခု ကို မျှဝေပေး လိုက်ပါ တယ်။ အရင်းနှီး ကိစ္စမတင်ပြခင်။ ပြောပြ သင့်သည့် အဖြစ် အပျက် တစ်ခု ရှိ ပါတယ်။
စတိမ့်ဖော့်(Stanford) တက္ကသိုလ် ကကျောင်းဆရာမ ဖြစ်သူ။ တီနာ ဇီးလစ်(Tina seelig) ဟာကျောင်းသား/သူတွေကို စိန်ခေါ်မှု တစ်ခုပြုလုပ် လိုက်သည်။ ကျောင်းသား/သူတွေ ကိုအသင်း (၁၄) သင်းဖွဲ့လိုက်သည်။ အသင်း (၁)သင်းစီ ကို စာအိတ် (၁)အိတ်စီ ပေးသ ည်။
စာအိပ်ထဲမှာငွေ (၅)ဒေါ်လာ ထည့်ထား သည်။ (မြန်မာငွေ ကျပ်= ၆၅၀၀ ၀န်းကျင်)ငွေ(၅)ဒေါ်လာထဲနှင့် ကိုယ့်အိုင်ဒီယာ ကိုယ် သုံးပြီး။ အရင်းအနှီး လုပ်ခိုင်း မည် ။ စည်းကမ်း သတ်မှတ် ချက်က ။ပြင်ဆင်ချိန် (၁)ပတ်ရမည် ။
စာအိတ် ထဲကငွေ(၅)ဒေါ်လာဖြင့် ကိုယ်ကြိုက်သည့် လုပ်ငန်း။ သွားရင်းနှီးပြီး ငွေထပ် တိုးလာအောင်လုပ်ဆော ရမည်။ စာအိတ်ကို ဖောက်လိုက်သည်နှင့် ရင်းနှီးရမည့် အချိန် (၂)နာရီသာ လုပ်ရ မည်။
(၁၄)သင်းစလုံး ရင်းနှီးမှုပြုလုပ် ခဲ့ပြီးပါက။၂ နာရီအတွင်း ရင်းနှီးခဲ့သည့် ပုံစံ။လုပ်ဆောင်ချက်။ပြန်ရလာ သည့်ငွေ၊ စသည့် လုပ်ဆောင်ခဲ့ သမျှကို။ အခန်းရှေ့သို့ ထွက်ပြီး ကျောင်းသား/သူ အားလုံး ရဲ့ ရှေ့၌ပြန်လည် ရှင်းလင်း ပြောပြ ရမည်ဖြစ် သည်။
အသင်း(၁)သင်းစီ ရဲ့ရှင်းလင်းပြောကြားရမည့် အချိန်ဟာ (၃)မိနစ် စီသာ ရရှိ မည်ဖြစ် သည်။ ဒီစိန်ခေါ်မှု မှာရင်းနှီးပြီး ငွေပြန် မရသည့် အသင်းရှိ သလို၊ငွေ အတော်အသင့် ပြန်ရ လာသည့် အသင်းလဲ ရှိသည်။ အံ့အားသင့် စရာက အသင်း (၁)သင်းဟာဒေါ်လာ (၆၀၀)ကျော်အထိ အမြတ် ရရှိအောင် စွမ်းဆောင် နိုင်ခဲ့ သည် ။ မြန်မာငွေ ကျပ်(၇သိန်း ၈သောင်း)၀န်းကျင်။ ထူးဆန်း သည်က စာအိတ်ထဲ ကငွေ(၅)ဒေါ်လာကို တပြား တချက်မျှ မထိခဲ့ ဘူးလို့လဲ သိရသည်။
ငွေ(၅)ဒေါ်လာမှ = ငွေ(၆၀၀)ဒေါ်လာ ထိ ဆိုတော့၄၀၀၀% အမြတ် ရရှိခြင်းဖြစ် သည်။၂ နာရီအတွင်းထဲနှင့်ူဒီ အသင်းဘယ်လို လုပ်ခဲ့ ပါသလဲ ??ဟုတ်ကဲ့။ သူတို့ အသင်းရဲ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ မဖော်ပြခင်။ အခြားအသင်းများ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အနည်းငယ် ဖော်ပြ ချင်ပါတယ်။
အသင်း = (၁)ငွေ (၅)ဒေါ်လာဖြင့် တာယာ လေထိုးစက် ၊လေစစ်ဆေးစက်၊ တွေကို ငြားရမ်းလာပြီးကျောင်းတွင်းကကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီးပါကင် ထိုးသည့် နေရာ ရဲ့ အနီးမှာ ၀န်ဆောင် မှုပေးသည်။တာယာ စစ်ဆေးခ၊လေထိုးခတွေကို ၀န်ဆောင်ကြေးယဉ် တစ်စီးကို (၁)ဒေါ်လာ ကောက်ခံ သည်။
ဖြစ်ချင်တော့ ယဉ်စီးနှင်းသူကျောင်းသား/သူများသဘောကျကြသည်။ လမ်းကြုံတုံးလေး ကိုယ့်ယဉ်ရဲ့တာယာ၊ လေ၊ တွေကို စစ်ဆေး ကြသည်။
ခဏကြာတော့ သင်းသားတွေဟာ အိုင်တီယာ တခုထွက်ပီး။ စမ်းသပ်ချင် သည့် စိတ်ဖြင့်။ ၀န်ဆောင်ခ ငွေ(၁)ဒေါ်လာ မကောက်တော့ ပဲ။ ယဉ်ပိုင်ရှင် ကသာ၊ ၀န်ဆောင်ခကို စေတနာရှိ သလောက်၊ပေးချင်သလောက်ပေး။ ဆိုသည့် ဆိုင်းပုဒ်ပြန်ပြောင်း လိုက်သည်။
ရလဒ်ကတော့ ၀န်ဆောင်ခ ပိုအရ များလာခြင်းဖြစ် သည်။ တချို့ ယဉ်ပိုင်ရှင်တွေဟာ(၃)ဒေါ်လာမှ (၅)ဒေါ်လာထိ ထုတ်ပေးကြ သည်။ ဒီလို စွမ်းဆောင်မှု ကတော့ ပြသနာတွေကို အကဲ ခတ်ပြီး ပြုပြင်နိုင်စွမ်းရှိ ခြင်းပဲ ဖြစ်သည်။
ကျန်ရှိသည့် အသင်းများဟာလဲဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း။ကျောင်းတွင်း သို့ချိုချဉ်၊ မုန့်၊ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ခြင်း။popular ဖြစ်တဲ့ သီချင်းခွေထုတ်လုပ်ရောင်းခြင်း။ ကျန်သည့် ကျောင်းသား/သူ အားလုံးရဲ ၀င်ငွေ၊ အမြတ်ငွေတွေ ကတော့ မဆိုးကြ ပါ။
ဒါပေမဲ့ ငွေလုံးဝ ရှာလို့ မရတဲ့ အသင်းလဲ ရှိပါတယ်။ သူတို့ အသင်း ကတော့ စာအိတ်ထဲက ငွေ(၅)ဒေါ်လာကိုထီ သွားဝယ် လိုက်သည်။ ထီမပေါက် ပါ။ ကံနဲ ကစားလို့ အရင်းနှီးပါ ပြုတ်သွားရော။ ဒေါ်လာ (၆၀၀) ရှာနိုင်သည့် အသင်း။
ဟုတ်ကဲ့….သူတို့ အသင်းေ ကတာ့ အိုင်ဒီယာ အတ်ာလေးကောင်းပါတယ်။ စာအိတ်ထဲက ငွေ(၅)ဒေါ်ကို အာရုံမစိုက်။ အခန်းရွေ့ထွက်ပြီး။ ကျောင်းသား/သူများရဲ့ ရွေ့သို့ရွင်းလင်းပြောကြား ရမည်။ (၃)မိနစ် အချိန်လေးကို သာ အသုံးချဖို့ အာရုံ စိုက်သည်။
လုပ်ဆောင်ချက်။ကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့ သူတို့ သွားသည်။ကုမ္ပဏီ အကြီးအကဲနှင့် တွေ့စုံသည်။ သူတို့ကျောင်းမှာ ပြုလုပ်နေသည့်စိန်ခေါ်မှုအကြောင်းအားလုံးကိုရှင်းလင်းပြောပြသည်။
ကျောင်းသား/သူ အားလုံးရှေ့ ၌(၃)မိနစ် စကားပြောရမည့် အချိန်မှာကုမ္ပဏီအကြောင်းကို ကြော်ညာပေးခြင်း။ ကုမ္ပဏီရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းကို ရောင်းပေးခြင်း။ ကျောင်းသား/သူ(၁၄)သင်းဆိုသည်မှာ နည်းသည့် လူတွေ မဟုတ်၊ အခြားကျောင်းသား/သူတွေ လည်း ရှိသေး သည်။
ဒီလူ အများရဲ့ရှေ့၌ ကုမ္ပဏီ အကြောင်းတွေ ကိုကြော်ညာပေးမည် ဆိုပါက။ ကုမ္ပဏီအတွက် အကျိုး ရှိမည်။ ကြော်ညာခ စရိတ် အတွက် သူတို့ အသင်း ဒေါ်လာ(၆၀၀)ရ ချင်သည်ဟု ကမ်းလှမ်းလိုက်သည်။
ကုမ္ပဏီ အကြီးအကဲလည်း သူတို့ အသင်းကို သဘောကြ သည်။ ကမ်းလှမ်းမှု ကို လက်ခံပြီးဒေါ်လာ(၆၀၀) ထုတ်ပေး လိုက်သည်။
ငွေအများဆုံး ရသည့်အသင်းကတော့ကုမ္ပဏီ အကြောင်း ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ကြော်ညာပေးရင်း သူ့တို့ရဲ့ အိုင်ဒီယာ အကြောင်းကို ပါရှင်းလင်းပြောပြ သည်။
ဒီအဖြစ် အပျက်ကို ဒီလောက်နှင့်ပဲ အဆုံးသတ် လိုက်ပါတော့ မည်။ အရင်းအနှီး တစ်ပြားမှ မသုံးပဲ။ ငွေ (၆၀၀) ဒေါ်လာ ရရှိအောင် စွမ်းဆောင် နိုင်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသား/သူ တွေဟာ။ ဘာတွေ သင်ပေးသွားပါသလဲ။ ???
ဟုတ်ကဲ့။ ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ ငွေအင်အားကိုမကြည့်သင့်ပါ။အာရုံမစိုက်သင့်ပါ။ကိုယ့်မှာ ရှိသည့် ညဏ်ရည်ကိုသာအသုံးချ လိုက်ခြင်းဖြစ် သည်။ အကယ်၍ငွေ ၁၅ သိန်းရှိမှ။သိန်း ၃၀ ရှိမှ။
သိန်း ၁၀၀ ရှိမှ။ရင်းနှီးနိုင်မယ်။လုပ်နိုင်မယ် လို့သာတွေးနေရင်အာရုံစိုက်နေရင် မင်းဦးနှောက်ကို မင်းပဲပြန်ပိတ်ပင်လိမ့်မယ်။ဘာ အိုင်ဒီယာမှ မထွက်ပါ စိတ်ကူးကောင်းမှလဲထွက်လာမှာ မဟုတ်။
မင်းဝင်ငွေ များချင်လို့။ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းလုပ် ချင်တာလေ။ ငွေရှာချင် တာလေ။ ငွေရှာဖို့ အတွက်ကိုငွေမရှိဘူး၊အရင်းနှီးနည်းတယ်လို့ သာ စွတ်ပြောနေရင် ရယ်စရာ ဖြစ် လိမ့်မယ်။
တကယ်တော့ ငွေထက် တန်ဖိုးကြီးတာမင်း ခေါင်းပဲ။ ခေါင်းသုံးပါ၊ ညဏ်သုံးပါ။ အိုင်ဒီယာ သုံးပါ။ အဲ့ဒီ အရာတွေက ငွေထက်သန်း ပေါင်းများစွာ တန်ဖိုးရှိတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံထဲက အရင်းနှီး နည်းနည်းနဲ့ လုပ်ငန်း စကြတဲ့ လူအတော်များများကို တွေ့ဖူးသည်။ အင်တာဗျူးဖူး သည်။ အဲ့ထဲက တစ်ယောက် အကြောင်းကို အရင် ရေးတင်ပြချင် ပါတယ်။ ကျန်တာက နောက်မှ ဆက်လက် တင်ပြ မည်။
သူကကောင်မလေးပါ။ ဒုတိယနှစ်၊ အဝေးသင်ကျောင်းသူ။ ၁၀ တန်းပြီး တာနှင့် ။ နံနက် ၄ နာရီနိုးသည်။၀က်ခေါက်၊ ကြက်ခေါက်တွေကြော်သည်။ ဈေးသို့ တင်ရောင်းသည်။
နေ့ခင်းပိုင်းမှ ညနေအထိ လေယဉ်လက်မှတ်ရောင်း ကိုယ်စားလှယ် လုပ်သည်။ ဆိုင်ခန်းငယ် ကလေးဖြင့်လေယဉ် လက်မှတ်ရောင်းနေသည်။
သိပ်မကြာမှာပဲ ဆိုင်ကို အလှဆင်ပြီး။ အမျိုးသမီးအိတ် ကလေးတွေ ကို အနည်းအကျင်း တင်ရောင်းသည်။ နောက်ထပ် မကြာခင်မှာပဲ သူသဘောကျသည့် အင်္ကျီတွေ သူသဘောကျသည့် လက်ဆောင် ပစ္စည်းတွေကို အနည်းအကျင်း တင်ရောင်းသည်။
သူလုပ်ချင်တာကို တတ်နိုင်သလောက် သူလုပ် လာသည်။ အခုလဲ သူပုံနှိပ်စက်တွေ ပါ လုပ်နေသည်။ပုံနှိပ်သည့် နေရာက အိမ်မှာ။ ပစ္စည်း/အလုပ် လက်ခံ တာက ဆိုင်မှာ ဖြစ်သည်။
သူမ လုပ်ချင်တာကို တစ်ခုပြီး တစ်ခု။ တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့်။ တတ်နိုင်သလောက် လုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ကဲ့ သူမလည်းသူ့ အိုင်ဒီယာကို အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ စာဖတ်သူလည်း‌ ငွေကို ဦးစားမပေးသင့်။ ငွေကို အာရုံ မစိုက်သင့်။
ငွေ ဒီလောက်ရှိမှငွေ ဟိုလောက်ရှိမှ ဆိုတာ ပတ်ဝန်းကျင်က သတ်မှတ် ထားတာ ပါ။
ငွေကို အာရုံစိုက်နေရင်။ ဦးနှောက်လုပ်ဆောင် ချက်တွေ။ စိတ်းကူးကောင်းတွေ။ အိုင်ဒီယာကောင်းတွေ ကို ပါ ဖြတ်စီးပြစ် လိမ့်မယ်။
ကိုယ် ဘာ ကျွမ်းကျင်တာ ကိုယ် ဘာတွေ့ထား တယ်။ကိုယ် ဘာလုပ် သင့်တယ်။ ဘယ်အခွင့်အရေး ကို ယူသင့် တယ်။ စသည့် အချက်တွေကို သိ ပါစေ။ မသိသေးလဲ အဖြေရှာ။ ကိုယ့်မှာ အိုင်ဒီယာကောင်းတွေရှိရင်။ လက်တွေ့ လုပ် လိုက်ပါ။
တတ်နိုင်သလောက် စလုပ်ပါ။လုပ်ပြီး မအောင်မြင်သေးပေမဲ့ အားမငယ် ပါနဲ့။ ပြသာနာတွေကို သိရှိလာမယ်။ ဖြေရှင်း တတ်လာ မယ်။ အစပိုင်း ၀င်ငွေနည်းနေပေမဲ့ ၀င်ငွေ များလာအောင် လုပ်နိုင် မည့် နည်းလမ်းတွေကို အဖြေရှာ တတ်လာ မယ်။ ရည်မှန်းချက်ကို အလှမ်းမဝေး ပါစေနှင့်
ဥပမာ(၁)လမှာ ၀င်ငွေ (၃)သိန်း ရှိတယ်။ ရည်မှန်းချက်က နောက်လမှာ ၀င်ငွေ(၁၅)သိန်းတိုးချင်တယ်ဆိုရင်တော့။ ဦးနှောက်က မဖြစ်နိုင်တဲ့ အကြောင်းတွေပဲ တွေး လိမ့်မယ်။
၀င်ငွေ (၃)သိန်းရှိရင် နောက် လမှာ(၅)သိန်းဝင်နိုင်အောင် ရည်မှန်း ထားပါ။ အာ့မှ ဦးနှောက်လဲ အလှမ်းမဝေးတဲ့ ရည်မှန်းချက် ကိုဖြစ်မြှောက်အောင် အဖြေရှာပေး လိမ့်မည်။
အိုင်ဒီယာရှိပြီး လက်တွေ့မလုပ်သေးပဲ။ အစဉ်စီချ လိုက်။ ဟိုဟာ စောင့်လိုက်၊ဒီဟာ စောင့်လိုက် ဆိုရင်တော့ဘ၀က ဘာမှ ဖြစ်မြှောက်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ငွေထက် တန်ဖိုးကြီးတာ မင်း ခေါင်းပါ။ လက်တွ့လုပ်ဖို့လဲ လိုတယ်။
စာဖတ်သူလဲ အရင်းအနှီး ကိစ္စကို ဘယ်လိုမြင် ပါသလဲ၊ဘယ်လို ယူစ ပါသလဲ၊ ဆိုတာကိုComment ပေးကြပါလို့။ ဗဟုသုတတွေ မျှဝေရင်း အပိုင်း(၂)မှာ ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားကြ မယ်။ အားလုံးငွေကြေးရေးအဆင်ပြေကြပါစေ။
Like & Share လုပ်ပေးကြပါလို့။